जिब्रोमा ब्रेक कसरी लगाउने ? - गजु Real - साप्ताहिक
जिब्रोमा ब्रेक कसरी लगाउने ?
हाड नभएको जिब्रो चिप्लिन्छ । जिब्रो चिप्लिँदा इमान खुस्किन्छ । इज्जत भाँचिन्छ । नैतिकता मर्किन्छ । प्रतिष्ठामा चोट लाग्छ । इमेज बिग्रिन्छ । जहाँसुकै जिब्रो चिप्लिन सक्ने भएकाले यसको स्पिड कन्ट्रोल जरुरी छ । जिब्रोको ब्रेक फेल जुनसुकै बेला हुनसक्छ, नियन्त्रणको कला सिक्नु आवश्यक छ ।
जिब्रो चिप्लिएर बदनाम भएका थुप्रै घटना छन् । पछिल्लो पटक हिसिला दिज्यू नराम्रोसँग पछारिनुभएको छ । देश खारेज गर भन्दै चिच्याएपछि दिदी पछारिनुभएको हो । कसैले मनको कुरा मुखबाट आएको भने । कसैले दिमागको विचार मुखले बोलेको तर्क गरे ।
गजुरियल विश्लेषक हिसिला दीको मन पढ्न सक्दैन । दिमाग बुझ्न गाह्रो छ । हामीले विश्लेषण गर्ने भनेको उहाँको इतिहास र वर्तमान मात्र हो । नेपाली राजनीतिमा उहाँको लामो सहभागिता छ । त्यसैले पक्कै देशै खारेजीको माग गर्नुभएको होइन होला उहाँले । वर्तमानमा पनि नयाँ शक्तिको पुरानी नेतृ हुनुहुन्छ, पक्कै पनि देशै खारेजीको एजेन्डा उहाँको पार्टीको नहुन सक्छ । गजुरियल विश्लेषकलाई लाग्छ, उहाँको जिब्रो नै चिप्लिएको हो ।
आदेश खारेज गर भन्नुपर्नेमा ‘आ’ चाहिँ साइलेन्ट भएको हुनसक्छ । उहाँकै भनाइमा, बेहोसीमा त्यो शब्द निस्किएको हुनसक्छ । आदेश भन्ने बेलामा ‘आ’ अक्षर भित्रै दबेको पनि हुन सक्छ । आदेश, परमादेश, मधेस, परदेश जे भन्न खोजेको भए पनि शब्द आपत्तिजनक छ । यसलाई अहिलेका लागि टङ स्लिपकै अर्थमा लिनुपर्ने गजुरियल ठम्याइ छ ।
हामीले थाहा पाइसक्यौं, टङ स्लिपले व्यक्तिको के–के कुरो स्लिप हुन सक्दो रहेछ । त्यसैले टङ स्लिप रोक्ने केही गजुरियल उपाय यहाँ प्रस्तुत गरिंदैछ । सबैभन्दा पहिले दिमागलाई ठन्डा राख्नुपर्छ । किनभने शरीरका प्रत्येक अंग दिमागसँग जोडिएका हुन्छन् । जिब्रो त झन् दिमागको सबैभन्दा नजिकको अंग हो । तातो दिमागले जिब्रोलाई लटर–पटर बनाइदिन्छ । लटरपटर जिब्रोले भन्नुपर्ने कुरा बिर्सन्छ, नभन्नुपर्ने कुरा सम्झन्छ ।
मनलाई शान्त राख्नु दोस्रो उपाय । शब्दको निर्माण मनमा हुन्छ । मनमा निर्माण भएको शब्दलाई दिमाग सम्पादन गर्छ । सम्पादित शब्द जिब्रोको माध्यमबाट बाहिर निस्कन्छ । अशान्त मनले कुन शब्द सही हो, कुन वाक्य गलत हो, कुन कुरा सोच्नु हुन्छ, कुन कुरा भन्नु हुन्न भन्ने थाहा पाउँदैन । जिब्रो अराजकता नियन्त्रणका लागि योग र ध्यानको सहयोग अनिवार्य रहेको गजुरियल ठम्याइ छ ।
जिब्रो चिप्लिनबाट जोगिने अर्को उपाय शरीरको भाषा बुझ्नु हो । ह्दयमा शब्द बन्नुअघि शरीरमा संवेदना पैदा हुन्छ । शरीरमा राम्रो संवेदना आयो भने मनमा राम्रै शब्द बन्छन् । नराम्रा संवेदना आए भने नराम्रै शब्द बन्छन् । त्यसैले शरीरमा नराम्रो संवेदना आएका बेला सकेसम्म मौन बस्नाले जिब्रो चिप्लिने कार्य कम हुन्छ ।
अर्को उपाय हो, मिठाई चुसिरहने । चुइगम चपाएर बस्ने । पान खाइरहने । सुपारी टोकिरहने । त्यसो गर्नाले मनमा आएका कुरा नियन्त्रण हुन्छन्, बेला न कुबेला फुत्किन पाउँदैनन् । नराम्रा शब्द उच्चारण भएका छन् भने पनि राम्रो बनेर बाहिर निस्कन सक्छन् भन्ने गजुरियल अनुमान छ । जिब्रोलाई सकेसम्म सात्विक भोजन गराउनु उपयुक्त हुन्छ । बियर नपिउने, ह्विस्की नचुसाउने र आक्रामक शब्द बोल्न नदिने । गुलियो, पिरो, चर्को, चिल्लो खानाले पनि जिब्रो चिप्लिने डर हुन्छ । खानैपरे पनि जिब्रोले थाहा नपाउने गरी घुटुक्क पार्नुपर्छ ।
देख्दा जिब्रो पुग–नपुग २ सय ग्रामको होला, तर शरीरमा यसको ठूलो महत्व छ । दुई इन्चीको जिब्रोको स्वादका लागि सिंगो शरीरलाई अस्वस्थ नबनाऔं । त्यति सानो जिब्रोका कारणले आफ्नो सिंगो नामलाई बदनाम नगराऔं । जिब्रोलाई नियन्त्रण गरौं, जिन्दगी सफल बनाऔं ।